9 iimenyu eziphendulayo zeCSS zokunika iwebhusayithi yakho ubuhle | Izidalwa ezikwi-Intanethi
9 iimenyu ze-CSS ezinoyilo oluphendulayo lwangoku
UManuel Ramirez | | CSS, Uyilo lwewebhu
Siyaqhubeka nolunye upapasho lwezo uyilo lwewebhu nge Uluhlu oluhle lweemenyu zeCSS ezinoyilo oluphendulayo. Uthotho lweemenyu zeCSS ezinikezelwe ngokukodwa kuloo fomathi ingahlali ngaphezulu kwe-intshi ezingama-768 kwaye esivumela ukuba iwebhusayithi yethu ilungele ukuba iindwendwe zingene kwi-smartphone yazo.
Inyani yile yokuba nganye kwiimenyu ezi-9 ze-CSS ezinoyilo lweselfowuni oza kuzifumana apha ngezantsi Zintle kakhulu kwaye baxhotyiswe kuthotho lweemiboniso kunye noyilo lomgangatho ophezulu kunye neenkcukacha. Ungaphoswa nayo Olu luhlu lweemenyu ezijikelezayo ezinemilo eyahlukileyo ukubonisa amacandelo ahlukeneyo kwiwebhusayithi yethu.
1 Imenyu elula eshukumayo
2 Imenyu yemagga yeselfowuni
3 Ukuhamba kwe-app
4 Iselfowuni yokuhamba oopopayi
5 Ingqondo ye-SVG UI yokuhamba
6 Ulwazi lweenkcukacha kunye nokuhamba
7 Ukuhamba ngenqanawe kweSelfowuni
8 Ifrosty Nav «Guqula» isiphumo
9 Imenyu yeSelfowuni
Imenyu elula eshukumayo
Imenyu elula yeselfowuni yendalo yangoku kwaye isisa ngqo kumgangatho wangoku woyilo lwewebhu izixhobo mobile. Imenyu ephendula ngokupheleleyo esebenzisa iBootstrap 3.x, FontAwesome, CSS flexbox kunye neCSS BEM Syntax. Imenyu elula eyilelwe kakuhle kwaye isekwe kubulula bayo bokunconywa.
Imenyu yemagga yeselfowuni
Iimenyu zeMega zisivumela ukuba songeze iikholamu, iiwijethi kunye nalo lonke uthotho lwezinto eziyimfuneko ukugcwala ngokuthe ngqo kwindawo yethu Iwebhu. Le menyu yecala ephendulayo ye-smartphone ilula kakhulu kwaye uya kuwafumana onke amacandelo esona sithuba usisebenzisa ngokwezibalo.
Sijongene nemenyu ephendulayo engumbono ngakumbi. Ukuba ukhangela into yahlukile kumgangatho wangoku Kwiimenyu ezihambayo, le menyu inokulunga ngokufanelekileyo. Ukusuka kwi icon yehamburger ungalwandisa uthotho lweethebhu onokufikelela kuzo onke amaphepha ewebhusayithi.
Iselfowuni yokuhamba oopopayi
Le menyu ephendulayo yahlukile kwezinye ngokungaphezulu kwesinye oopopayi abahle botshintsho kuba sicinezela imenyu yehamburger yoyilo lwediagonal. Ikwaxabisa oopopayi kwisikhethi sokuhamba ukuze siyinike amandla amakhulu. Sebenzisa i-GSAP TweenMax kunye ne-TimelineMax zoopopayi.
Ingqondo ye-SVG UI yokuhamba
I-SVG kunye ne-CSS3 yoopopayi yemenyu yoqobo eyokusa kutshintsho olunobuchule kunye nophuma kwezinye iimenyu eziphendulayo kolu luhlu. Kukwaphawuleka ngefayile yayo umbala omkhulu kunye nefuthe elikhulu ukuba inokunika indawo yakho yewebhu xa ijongwa kwifowuni enjengecwecwe.
Ulwazi lweenkcukacha kunye nokuhamba
Ifana kakhulu neyangaphambili kuyilo kunye nokusetyenziswa kwemibala, ubuncinci kulwakhiwo lokuqala, kodwa ngeli xesha lahlukile ngo isetyhula ephendulayo yemenyu ebekwe kwicala lesikrini. Iifilimu zihamba kakuhle kwaye yenye yemenyu ephendulayo kunye nomnxeba omkhulu ukwenza ukuba iwebhusayithi yethu ibonakale kwiselula okanye ithebhulethi.
Ukuhamba ngenqanawe kweSelfowuni
Esi sisiphumo se- «Gooey» esisetyenziswe kakuhle kwimenyu yendlela eshukumayo ixhomekeke kwiCSS kunye nokutshintsha kwejQuery yoopopayi. Imalunga nothotho lwamaqhosha avulekileyo xa ucofa kwi icon yehamburger esinayo embindini wenxalenye esezantsi yesikrini. Enye yeemenyu eziphendulayo ezingenangqondo ezikhoyo ngoku.
Ifrosty Nav «Guqula» isiphumo
Le menyu ephendulayo izama ukufaka ifayile ye- oopopayi abagudileyo xa sicinezela iqhosha ibhamburger. Iziphumo ezenziwayo kukufiphalaza ukuze imvelaphi yesikrini iphazanyiswe kwaye sikwazi ukwahlula ngcono icandelo ngalinye apho iindwendwe ziya kudlula khona kwiwebhusayithi yethu. Sinezinto oopopayi ezilula nganye iindidi ngaphandle fanfare kakhulu, kodwa nempembelelo enkulu.
Silugqibile olu luhlu iimenyu eziphendulayo ezihambayo nomnye umgangatho ophezulu. Ngaphandle kokulibala kuqala ukuba ungaya kolunye uthotho lweemenyu ukwahlula iwebhusayithi yakho, ezi nje kwiscreen esigcweleyo.
Imenyu yeSelfowuni yenye ibonakaliswa yimpembelelo ye-jQuery kwaye icwangcisiwe kuzo zombini i-HTML kunye ne-CSS. Ilula ngokulula kulwakhiwo lwayo, kodwa ngokuqinisekileyo iyakwazi ukunika ipremiyamu yokuthinta iwebhusayithi yethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » 9 iimenyu ze-CSS ezinoyilo oluphendulayo lwangoku
I-Wacom iveza ikhathalogu yayo entsha eSpain: iWacom Intuos entsha, iCintiq Pro 24 nangaphezulu
9 iimenyu zebarbar esecaleni zeCSS ongenakuphosa